နိုင်ဂျီးရီးယား Lago ရှိဆန်စက်စက်,ဆန် destoner အလုပ်လုပ်နိယာမ
ဤစီးရီးဖျက်ဆီးစက်ကိုအဓိကအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောစပါးနှင့်ကျောက်တုံးများခွဲခြားရန်အသုံးပြုသည်, ဂျုံနှင့်ပြောင်းဖူး. dual တုန်ခါမော်တာတပ်ဆင်ထားသည်, ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားမြင့်သည်, ကြီးမြတ်တန်းနှင့်ခွဲခြာအကျိုးသက်ရောက်မှု, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, ဆူညံသံ, အဘယ်သူမျှမဖုန်မှုန့်လျှံနှင့်တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်.
ဆန်စပါးဖျက်စက်စက်၏အခြေခံမူမှာတုန်ခါမှုအားဖြင့်ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်ကျောက်စရစ်များကိုခွဲထုတ်ရန်ဖြစ်သည်, လေထုစီးဆင်းမှုကိုညှိခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်၏အကွံညှိ. အစေ့သည်မတူညီသောအမှုန်အရွယ်အစားနှင့်တိကျသောဆွဲငင်အားအမှုန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော granular ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်. အချို့သောပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်းတုန်ခါမှုသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခါ, အမှုန်အမျိုးမျိုးကို၎င်းတို့၏ဆွဲငင်အားပေါ် မူတည်၍ အဆင့်အမျိုးမျိုးသို့ခွဲခြားသည်, ဘောဇဉ်အရွယ်အစား, ပုံသဏ္.ာန်, နှင့်မျက်နှာပြင်ပြည်နယ်.
စပါးကြိတ်စက်စက်အလုပ်လုပ်သောအခါ, ပစ္စည်းအဆက်မပြတ် feed ကို Hopper ကနေကျောက်မျက်နှာပြင်အလယ်ထဲသို့ဝင်. မျက်နှာပြင်၏တုန်ခါမှုနှင့်ပစ္စည်းအလွှာမှတစ်ဆင့်ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်, အမှုန်များအကြား porosity တိုးပွားလာသည်, ပစ္စည်းတစ် fluidized ပြည်နယ်၌တည်ရှိ၏, နှင့်အလိုအလျှောက်ခွဲခြားရာထူးတိုး. ကျောက်တုံးကြီး၏အလေးချိန်ထက်နည်းသောကျောက်စရစ်ခဲသည်မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်နှင့်ထိတွေ့နေသည်. အထက်သို့ floating, ဆွဲငင်အား၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ, inertial အင်အားစုနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်နို့တိုက်ကျွေးရေး, ဒါကြောင့်အသားတင်စပါးထွက်ပေါက်မှလျှော; အချိုးအစားကြီးမားသည့်ကျောက်တုံးသည်မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်၏တုန်ခါမှုစွမ်းအင်နှင့်လေစီးကြောင်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်ရှိကျောက်မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လျှောကျနေစဉ်. Juishi ခရိုင်သည်ရွေးချယ်ထားသောmovedရိယာသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်. ရွေးချယ်ထားသောinရိယာရှိရွေးချယ်ထားသောအခန်းကိုပန်ကာကလေထဲသို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်. ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်၏ရှေ့ဖက်ကို arc-shaped ချန်နယ်တစ်လျှောက်ပြန်လွင့်သွားသည်, ကျောက်တုံးထဲ၌အနည်းငယ်မျှသောပမာဏအနည်းငယ်ကိုဖြိုဖျက်ပြီးသောနေရာသို့မှုတ်ခြင်း, ကျောက်ခဲနှင့်အတူဥတုကိုရှောင်ရှား.